“Why Don’t We” တဲ့!! သာမန်မြင်ဖူး ကြားဖူးနေကြ အဖွဲ့နာမည်တွေနဲ့ ကွဲထွက်နေတဲ့ သူတို့အဖွဲ့ဟာဆိုရင်တော့ American Pop Boy Band တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Boy band တွေမရှိသလောက်ရှားပါးလာနေပြီဖြစ်တဲ့ music industry အတွက် တစ်တပ်တစ်အားဖြစ်စေမယ့် အဖွဲ့လေးလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။
“Why Don’t We” ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ September 27, 2016 ကမှ အဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်လို့ အဖွဲ့သက်တမ်း ၂ နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုပေမယ့် သူတို့ရဲ့ Fan Size ကတော့ မသေးလှပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ Instagram (whydontwemusic)ဟာဆိုရင် Follower 2.5M ကျော်ရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Follower တွေဟာဆိုရင်လည်း 1M နဲ့ အထက်မှာကြီးပဲ ရှိနေတာဆိုတော့ မခေလှဘူးနော်။
thank u for the best year of our lives… only ? from here
A post shared by Why Don’t We (@whydontwemusic) on Dec 29, 2017 at 2:00pm PST
Jonah Marais, Corbyn Besson, Daniel Seavey, Jack Avery, Zach Herron စတဲ့ Member ၅ ယောက်နဲ့ဖွဲစည်းထားတာဖြစ်ပြီး အားလုံးဟာ အသက် ၂၀ တောင်မပြည့်ကြသေးဘူးဆိုတော့ ကလေးလေးတွေပေါ့(သူငယ်ကြိုက်တဲ့ဘော်ဒါတွေကိုလဲ လက်တို့လိုက်ပါဉီး ?)။ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ၂ နှစ်တာကာလမှာ Only The Beginning (2016, EP), Invitation (2017, EP), Why Don’t We Jush (2017, EP), A Why Don’t We Christmas (2017, EP), Something Different (2017, EP) စတဲ့ EP Album ၅ ခုထွက်ရှိထားပါတယ် (သူတို့လေးတွေ သွက်တယ်နော်)။
မကြာခင်ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ သီချင်း “Trush Fund Baby” ဟာဆိုရင် အက်ထမိန်တို့ရဲ့ Perfect ဘုရင်ကြီး Ed Sheeran ကရေးစပ်ပေးထားတာပါတဲ့နော်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲ့ဒီသီချင်းထဲမှာဆိုရင် ကိုယ်တွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Ed Sheeran ရဲ့ Flow တွေကို ခံစားရမှာပါ။ ကဲဒီတော့ အက်ထမိန်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနှစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Trush Fund Baby နဲ့ Something Different ကို ခံစားကြည့်ကြဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကဲ နောက်ကျတဲ့ခြေထာက် သစ္စာဖောက် မဖြစ်ရအောင် သူတို့လေးတွေကို အမြန်ဆုံးသွားပြီး follow လုပ်ထားလိုက်ပါအုန်းနော်။
PREVIOUS POST Previous post: CNBLUE ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yonghwa တစ်ယောက် စစ်တပ်ထဲ တိတ်တိတ်လေးဝင်သွားခဲ့
NEXT POST Next post: မပေါ်လာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ EXO CBX ရဲ့ လာမယ့် April မှာ ရောက်လာတော့မယ့် Comeback